ကျင်းဖျင်​ မြောင်၊ ယောင်နှင့် ရှမ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရခရိုင် - ဝီကီပီးဒီးယား
ကျင်းဖျင် မြောင်၊ ယောင်နှင့် ရှမ်း
ကိုဩဒိနိတ်: 22°46′48″N 103°13′34″E﻿ / ﻿22.780°N 103.226°E﻿ / 22.780; 103.226ကိုဩဒိနိတ်: 22°46′48″N 103°13′34″E﻿ / ﻿22.780°N 103.226°E﻿ / 22.780; 103.226
၃၆၇၇ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၁၄၂၀ စတုရန်းမိုင်)
Jinping ကောင်တီရှိ Fenshuiling တွင်ရှုခင်း။ အမြင့် ca. 2060 မီတာ
ကျင်းဖျင် မြောင်၊ ယောင်နှင့် ရှမ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရခရိုင် ( တရုတ်: 金平苗族瑶族傣族自治县; ရိုးရာတရုတ် : 金平苗族瑤族傣族自治縣; ဖျင်ယင်: Jīnpíng Miáozú Yáozú Dǎizú Zìzhìxiàn )သည် တရုတ််််နိုင်ငံ၊ ယူနန်ပြည်နယ်ရှိ ဟောင်ဟေ ဟနီနှင့် ယီီကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စုတွင်တည်ရှိပြီး တောင်ဘက်တွင် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ လိုင်ချောင်ပြည်နယ်နှင့် နယ်နမိတ်ချင်းထိစပ်နေပါသည်။ ကျင်းဖျင်််််် ခေါင်းဆောင်းနီ ယို (红头瑶族 )ကို လက်ထပ်ပြီးသည့်နောက် သူတို့ဦးခေါင်းတွင် ဝတ်ဆင်သည့်ဓလေ့ရှိပါသည်
ကျင်းဖျင်ခရိုင် (1994: 113-132)စာရင်းအရ အောက်ပါလူမျိုးစုများကိုဖော်ပြထားသည်။
မြောင်နက် (黑苗) / မိုးပါ 蒙吧 / မိုးရှီ 施施
ချင်းရွှေမြောင် (青水苗 ) / မိုးနဲချာ 蒙能差; ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်: မိုးပူ 蒙补 / မိုးပေ 背背
ပန်း​မြောင်(花苗) / မိုးလဲ 蒙冷
ဖျန်တုံမြောင် (偏头苗) / မိုးရွှား 蒙刷; ခ​ြုံငုံသုံးသပ်ချက်: တရုတ်မြောင်လူမျိုး 苗苗 (လူဦးရေအနည်းဆုံး မြောင်အဖွဲ့ခွဲ)
မြောင်ဖြူ (白苗 ) / မိုးတုံ 蒙逗
ယုမျန် (育棉): ခေါင်ဆောင်းနီယောင် 红头瑶
မဲ : လန်တျန်ယောင် 瑶瑶၊ ဖျင်တုံယောင်ရှား 头瑶၊ ရှားယောင် 瑶瑶
လူရှမ်း (傣罗 ) (ရှမ်းနက် 傣傣၊ ရှမ်းမှိန် 傣:): ခုချူယီတွင်တည်ရှိသည်။ 初邑,  Shidong 石洞, Laomanhao 老蔓耗, Xiaohekou 小河口, Changtan 长滩
လေရှမ်း (傣泐 ) (Pu'er ဒိုင်普耳傣): Pu'erzhai普耳寨(အထက်上寨, တည်ရှိသော ဗဟို中寨, အောက်ပိုင်း下寨 ကျေးရွာပေါင်း), မိုးလားမြို့နယ် /勐拉乡
လူတိုင် လူနန် (鲁傣鲁南 ) (=水的儿子ရေ၏ကလေး; ထို့အပြင် ရေရှမ်း /水傣 နှင့် ရှမ်းဖြူ /白傣)
Red River သည် Jinping ကောင်တီ (ညာ) နှင့် Hekou Yao ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရခရိုင် (ဘယ်ဘက်) အကြားနယ်စပ်ကိုဖွဲ့စည်းသည်။
ရှားဖြူလူမျိုး (白沙人 ) (ကိုယ်တိုင်အမည် - Bure 布惹)
ရှားနက်လူမျိုး (黑沙人) (autonym: Kacha::): Zhemi Township /者米乡(Baha villages 村,  Bayi 巴 and နှင့် Pingzhai villages villages ရွာသုံးရွာတွင်) ။ အိမ်ထောင်စု ၂၃၅ စုနှင့်လူ ဦး ရေ ၉၆၅ ဦး ရှိသည်။
လားဟူနာ (拉祜纳 ) (က Black Lahu /黑拉祜 )
လားဟူရှီ (拉祜西 ) (Yellow Lahu / /黄拉祜)
လားဟူဖူး (拉祜普 ) (White Lahu / 白拉祜 )
အခြားစာရင်းတစ်ခုတွင်အောက်ပါတိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများနှင့်လူမျိုးကွဲအုပ်စုများကိုဖော်ပြသည်။ တည်နေရာများသည် ကျင်းဖျင်ခရိုင်မှလာသည် (၂၀၁၃ - ၈၉၊ ၁၀၁) ။
နောင် (弄们) (Nuomei/糯美): widely distributed across Jinping County. 10,323 households and 42,325 persons as of 2005. It is also spoken in Hanitian 哈尼田.
ပူလန်း (ဒေသအခေါ်: မန်/莽): in the4villages of Leigong Daniu 雷公打牛, Pinghe Zhongzhai 坪河中寨, Pinghe Xiazhai 平河下寨, Nanke Xinzhai 南科新寨 (also known as Longfeng village 龙凤村),အမည်် ည််််llllllllwhichwhichhichchh are administered by Jinshuihe Town (金水河镇). 110 households and 682 persons as of 2005.
လောင်မိုးရွာသို့ ဈေးလာဝယ်သည့် မြောင်လူမျိုးများ
လောင်မိုးရွာသို့ ဈေးလာဝယ်သည့် ယောင်လူမျိုးများ
လောင်မိုးရွာတွင်နေထိုင်သည့် A Tai Dam
Jinping (1981−2010) အတွက် ရာသီဥတု အချက်အလက်များ
84 79 75 77 82 88 90 89 86 85 84 84 83.6
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကျင်းဖျင်​_မြောင်၊_ယောင်နှင့်_ရှမ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရခရိုင်&oldid=641387" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၀ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၀၂:၄၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။